Calaamadaha joogtada ah: waxa ay yihiin, sida loo isticmaalo iyo tusaalooyin | Dib-u-cusboonaysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | 18/05/2022 12:00 | Deegaanka
Warshadaha moodada ayaa ah tan labaad ee ugu wasakhda badan aduunka, waxaana aad iyo aad u badan shirkado iyo naqshadeeyayaasha sharadka wax soo saarka masuulka ka ah. Shaki kuma jiro in warshadaha moodada ay u soo jeesteen moodada degdega ah sanadihii ugu dambeeyay oo aysan joojin koritaanka. Waxaas oo dhami waxay horseedeen abuurista noocyada waara taasoo hubinaysa daryeelka deegaanka iyo yaraynta saamaynta deegaanka ee ay leeyihiin.
Maqaalkani waxa aanu kuu sheegi doonaa oo ku saabsan noocyada ugu waaweyn ee waara ee jira, sifooyinkooda iyo sida ay u caawiyaan yaraynta saamaynta deegaanka.
2 Noocyada ugu wanaagsan ee joogtada ah
2.5 Shirkadda Playa & Co.
2.6 Maryan Bad
2.7 Dhab ah
Dhawr sano ka hor, waxay ahayd ku dhawaad ​​aan macquul ahayn in la iibsado dhar oo la xidho markii ugu horeysay maalin kasta. Qiimaha iyo la'aanta silsilado waaweyn, oo ah mid aad loo heli karo oo soo jiidasho leh dadweynaha, ayaa noo horseeday inaan sameyno go'aan ka fekeraya markaad iibsaneyso. Waxaa jiray isbedel 180 darajo muddo ka dib. Iyadoo silsiladaha waaweyn ee dharka ay qaadayaan tillaabooyin yar yar si ay uga caawiyaan sii jiritaankooda oo ay sameeyaan ururinta kaabsal, waxaa weli jira shaqo badan oo la qabanayo.
Xusuusnow, warshadaha moodada waa warshadaha labaad ee wasakhowga badan saliidda ka dib, meeraheena ma oggolaan karo in noocyada waaweyni ay dharka ku soo saaraan gabal iyaga oo aan tixgalinayn saamaynta muddada fog nagu yeelan karto. Sababtan awgeed, qaar ka mid ah naqshadeeyayaasha, dukaamada iyo stylists waxay go'aansadeen inay hoos u dhigaan shaqada. iyada oo la ilaalinayo iyo daryeelka deegaanka sida caadiga ah.
Inkasta oo inta badan noocyada joogtada ah ee aan weli si fiican loo aqoon, macaamiishooda ayaa si tartiib tartiib ah u koraya waxayna bilaabeen inay ogaadaan muhiimada dharkeena lagu sameeyo xaaladaha ugu fiican ee shaqaalaha iyo meeraha. Sidaas darteed shirkadaha qaarkood waxay doorteen inay abuuraan ururintooda waara.
Marka lagu daro iibsashada dharka joogtada ah ee qaar ka mid ah goobaha aan ku talineyno hoos, waxaad badbaadin kartaa deegaanka adigoo tagaya dukaamada canabka ah, aqoon-is-weydaarsiyada hal-abuurka leh ama beddelashada ama kiraynta dharka codsiyada qaarkood ee horeba u guulaystay. Shaki kuma jiro in ilaalinta meeraha maanta iyo la socoshada taariikhda aysan ahayn waxyaabo aan is qaadan karin.
Waddankeena, waxaa jira noocyo badan oo badan oo leh qiyam anshax iyo waara oo soo saara dhar aan fududayn in la isticmaalo, laakiin sidoo kale cusub. Waxaan ku tusineynaa fikrado aad ku cusbooneysiin karto dharkaaga marka aad meeraha nasasho siineyso.
Noocyada ugu wanaagsan ee joogtada ah
Waxa ugu muhiimsan ee shirkaddani waa inay ka fikirto wakhtigan si ay uga tagto dhaxal wanaagsan jiilalka mustaqbalka. Lifegist iibsada Global Organic Textile Standard (GOTS) dhar shahaado ah Yurub, iyo Madrid waa meesha dhammaan dharka laga soo saaro si looga fogaado raad-raaca kaarboonka ee maraakiibta.
Ecoalf waxay isu taagtay mid ka mid ah magacyada loogu aqoonsan karo moodada joogtada ah ee waddankeena, xitaa ka baxsan xudduudahayaga. Abuuraha, Javier Goyeneche, wuxuu rabay inuu ku muujiyo dharkiisa in ay suurtagal tahay in la sii wado tayada wanaagsan iyo dhadhanka wanaagsan iyada oo aan lagu xadgudbin kheyraadka dabiiciga ah.
Summadani waxay 100% ka go'an tahay deegaanka. Si aad u badan oo kabaha oo dhan waxaa loogu talagalay Barcelona waana shaqada farsamoyaqaannada ka shaqeeya warshad u dhow Alicante, taas oo u oggolaanaysa inay si joogto ah u eegaan xaaladaha shaqada iyo tayada wax soo saarka.
Markii ugu dambeysay, waxay bilaabeen kabo ka samaysan nopal ama galleyda, kuwaas oo ah walxaha waara iyo vegan. Shaki kuma jiro in fikrad cusub oo cusubi ay guul noqon doonto.
Shirkadda dharka dabaasha ee Catalan waxay diyaar u tahay guul marka xagaaga soo dhawaado iyo safarka xeebta uu yimaado. Nashqeeyaha qaybahan waa Peque de Fortuny, kaas oo leh dareen badan ayaa ku guuleystay inuu abuuro ururinta musqusha oo waara, oo si gaar ah loogu soo saaro istuudiyaha Barcelona.
Shirkadda Playa & Co.
Mashruucan moodada midnimo ee ay abuurtay Cristina Piña ayaa diiradda saaraysa dabeecadda. Iyada oo dharka lagu sameeyay walxaha dabiiciga ah ee dib loo warshadeeyay ee la xidhiidha badweynta, habka soo celinta soo celinta ka dibna ku deeqaya qayb ka mid ah faa'iidada mashruuca bulshada, Playa waxay u rogtay funaanad xariijimo ah dharka xiddigaha, sanadba sanadka ka dambeeya waxaa dhiirigeliyay. astaamo kala duwan
Shirkaddii way ka tagtay moodada degdega ah, oo muujinaysa in dharku uu noqon karo mid waara oo qurux badan, iyadoo la ilaalinayo qiimaha la awoodi karo iyo la socoshada isbeddellada ka imanaya noocyada waaweyn. Intaa waxaa dheer, María Malo waxay isku daydaa, mid kasta oo ka mid ah ololaheeda, macaamiisheeda si ay u horumariyaan maskaxiyan oo aad uga warqaba wax kasta oo ku xeeran.
Shirkadu way gaadhay meel adag oo ka mid ah warshadaha moodada. Nashqadeenayaasheeda Alicante waxay go'aansadeen inay hal tallaabo u sii qaadaan adduun waara waxayna sahamiyaan habab cusub oo naqshadeynta iyo isticmaalka alaabta ceeriin cusub si ay u sameeyaan ururintooda, inkastoo ay si buuxda u ixtiraamayaan deegaanka.
Haddii aad tahay mid ka mid ah kuwa qadarinaya gaarka ah ee dhar kasta oo ku jira dharkaaga, tani waxay shaki la'aan noqon doontaa calaamadda aad jeceshahay. Mashruucu wuxuu ka kooban yahay funaanado daabacan oo kooban oo ay sawireen 12 fanaan oo ka kala yimid daafaha caalamka.
Dhammaan qaybaha Skirt-kayga waa daabacado xadidan oo ay dhiiri galiyeen qaybaha kala duwan ee meereheena in la ixtiraamo kheyraadkeeda dabiiciga ah iyo xuquuqda aadanaha ee abuurayaashiisa.
Shirkadda Catalan waxay u heellan tahay waqti la'aanta qaybteeda, abuurista dhar tayo leh oo aan waligood ka bixi doonin qaabka. Iyada oo leh agab waara sida dhogorta dabiiciga ah iyo suufka, dharka dib loo warshadeeyay iyo wax soo saarka gudaha, dharka CUS waxa uu noqday lama huraan "waa in" labiskaaga ku jira.
Summada Ecoology waxay isticmaashaa dhar dabiici ah, deegaan iyo maryo dib loo warshadeeyey iyada oo si weyn loogu fiirsado faahfaahinta naqshadahooda, iyaga oo hubinaya in ay ku sii jiri doonaan dharkaaga sanado badan oo soo socda.
Sida aad arki karto, waxaa muhiim ah in la xidho dharka hoos u dhigaya saamaynta deegaanka, maadaama ay ka mid tahay warshadaha ugu badan ee wasakheeya meeraha oo maalin kasta sida ugu badan loo isticmaalo. Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto noocyada ugu muhiimsan ee waara ee jira iyo waxa ay yihiin khadadka shaqadoodu.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » noocyada waara
Waxaa muhiim ah in shirkaduhu ay aad uga warqabaan baahida loo qabo daryeelka deegaanka. Aniga ahaan, waa shirkadaha waaweyn kuwa ugu badan ee wasakheeya, waxyeelada ugu badanna u geysta meereheena.
Dhammaanteen waxaan u baahanahay inaan ogaano.
U jawaab Sumi